“देशको ठूलो सबस्टेशन ढल्के बरको कार्य सम्पन्न भएपचि कुलमानद्वारा प्रसन्नता व्यक्त कहीलेसम्ममा संचालन हुने “ – Krazy NepaL
“देशको ठूलो सबस्टेशन ढल्के बरको कार्य सम्पन्न भएपचि कुलमानद्वारा प्रसन्नता व्यक्त कहीलेसम्ममा संचालन हुने “
November 13, 2020 661
निर्माण व्यवसायीको लापर्बाही, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलगायत कारणले समस्यामा परेको देशकाे सबैभन्दा ठूलो सबस्टेशन ढल्केबरकाे निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कुल ४०० केभी क्षमताको याे सबस्टेशन बुधबार रातिदेखि पूर्णरुपमा चार्ज भइ सञ्चालनमा आएको हो ‘। प्राधिकरणले प्राविधिक भा’षामा ‘त्यसलाई ‘फूल ‘लोड’मा चार्ज भएको जनाएको छ।
आयोजनाका प्रमुख शुक्र देवकोटाका अनुसार लामो प्रतीक्षापछि आयोजना सम्पन्न भएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल र भारत दु”वै तर्फबाट एक हजार २०० मे’गावाट विद्युत् आदानप्रदानका’ लागि बाटाे खुलेकाे छ । कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युतसमेत त्यही सबस्टेशनमा जोडेर पूर्व–पश्चिम प्रवाह गरिनेछ।
याे सबस्टेशन विसं २०७२ माघमा पहिलो पटक १३२ केभीमा चार्ज भएको थियो । त्यसपछि भारतबा’ट कुल ८० मेगावाट विद्युत् आयात भएको थियो” । यस्तै, २०७४ सालमा याे सबस्टेशन २२० केभीमा चार्ज गरिएको थियो । नेपाल–भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको रुपमा ढल्केबर– मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनसमेत ४०० केभी क्षमताको भएकाले विद्युत् आदानप्रदानका लागि महामार्गसमेत नि’र्माण भइसकेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार ढल्केबर सबस्टेशन अब १३२, २२० र ४०० क्षमतामा नै सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यस्तै पूर्व–पश्चिम जहाँ जति मात्रामा विद्युत् आवश्यक पर्दछ प्र’वाह गर्न सकिनेछ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा नै माथिल्लो तामाकोशीलगायत आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले वर्षाको समयमा खेर जाने विद्युत् भारत पठाउनसमेत बाटाे खुलेकाे छ।
याे सबस्टेश’न नेपाली लगानी तथा नेपा’ली प्रविधिमा नि’र्माण सम्पन्न’ भएको प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी” निर्देशक कुलमान घिसिङले जान’कारी दिनुभयो । चिनियाँ ‘ठेकेदार क’म्पनी सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड” कम्पनीले तोकिएको सम’यमा पूरा नगरेपछि प्राधिक’रणले ठेक्का तोडेको थियो । आयोजनाको परामर्शको काम प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनि’यरिङ कम्पनीले गरेको’ हो। गएकाे वैशाख अन्तिम हप्ता नै याे सबस्टेशन निर्माण सम्प’न्न हुने अवस्थामा ‘पुगे पनि कोरोना भाइरसको जोखिमका का”रण रसुवागढी भन्सार नाकामा आइपुगेको सामान आ’योजना स्थल पुर्याउन सकिएको थिएन । पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशकै सबैभन्दा ठूलो सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न भएकाेमा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै नेपालका लागि महत्त्वपू’र्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो।
विसं २०७५ सालदेखि नि’र्माण सुरु भएको याे स’बस्टेशन आफू प्राधिक’रणमा रहँदा’ नै सम्पन्न हुने अ’पेक्षामा रहे पनि को’रोनाका’ कारण पछाडि स’रेको भन्दै उहाँले निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आए’को भन्दै सरोकार भएका सबैलाई धन्यवादसमेत दिनुभएको छ।
Prev“साताको अन्तिम दिन (शुक्रबार) नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेर कतिमा कारोबार हुँदैछ? “
Next“देशमा नै केही गर्न चाहाना हुनेहरुको मुख्य आकर्षण “केशर” खेती किलोको नै १० लाख”
नाकको छेउमा कोठी हुने व्यक्ति रहस्यमय, अरू ठाँउमा हुने कस्ता ? जान्नुहाेस्
अमेरिकाको चुनाबी माहोलमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पछी पार्दै बिडेन जितको नजीक